Baiboly pejy 16 - Ny Baiboly
Voalohany < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Manaraka Farany
Jenezy toko 27 (tohiny)
24Hoy izy: Marina tokoa va fa hianao no Esao, zanako? Ary hoy Jakoba: Izaho no izy. 25Dia hoy Isaaka: Arosoy àry hohaniko izato hazan'ny zanako, mba hitsofan'ny fanahiko rano anao. Dia naroson'i Jakoba teo anoloany izany ka nihinana izy; ary notolorany divay koa; ka nisotro.
26Rahefa izany, hoy Isaaka rainy, taminy: Manatòna hianao anaka, ka manoroha ahy. 27Dia nanatona Jakoba ka nanoroka azy; ary nandre ny hanitry ny fitafiny Isaaka, ka nitso-drano azy, nanao hoe: Eny, ny hanitry ny zanako, dia tahaka ny hanitry ny saha voatso-dranon'ny Tompo. 28Andriamanitra anie hanome anao amin'ny andon'ny lanitra sy amin'ny menaky ny tany; Mbamin'ny vary aman-divay an-kabetsahana! 29Hotompoim-pirenena maro anie hianao, Hiankohofam-pirenena maro hianao, Ho tompon'ny rahalahinao anie hianao, Hiankohofan'ny zana-dreninao hianao, Ho voaozona anie izay hanozona anao, Fa hohasoavina kosa izay hanisy soa anao!
30Vao avy nitso-drano an'i Jakoba Isaaka, ary vao nandao an'Isaaka rainy Jakoba, no tonga avy any am-pihazana kosa Esao, rahalahiny. 31Mba nanao nahandro tsara koa izy, ka nitondra izany tao amin-drainy, ary nanao tamin-drainy hoe: Aoka hiarina ny raiko sy hihinana ny hazan'ny zanany, mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy. 32Fa hoy Isaaka, rainy, taminy: Iza moa hianao? Ary hoy izy: Izaho no Esao zanakao lahimatoa. 33Tera-kovitra mafy indrindra Isaaka, ka nanao hoe: Iza àry ilay efa naka haza, ka nitondra teo amiko? Fa efa nihinanako avokoa izany, talohan'ny nahatongavanao; ary efa nitso-drano azy aho, ka ho voatsodrano tokoa izy. 34Vao nandre ny tenin-drainy Esao dia nikiaka mafy ery nitaraina tamin'alahelo mangidy sy nanao tamin-drainy hoe: Mba tsofy rano aho, dia izaho koa, ry Dada ô! 35Fa hoy Isaaka: Tonga ny rahalahinao nanao an-kafetsena ka lasany ny tso-dranonao. 36Ka hoy Esao: Noho ny nanaovana azy hoe Jakoba va no nanonganany ahy indroa izao? Efa naka ny fizokiako izy, ary inty indray ankehitriny, naka ny tso-dranoko koa. Dia hoy koa izy: Tsy mba misy tso-drano natokanao ho ahy va? 37Fa hoy ny navalin'Isaaka an'i Esao: Efa natsangako ho tomponao izy; sady efa nomeko azy ho mpanompony ny rahalahiny rehetra, ary nataoko be vary aman-divay izy. Ka ny aminao inona indray no azoko hatao, anaka! 38Dia hoy Esao tamin-drainy: Dia tsy manana afa-tsy io tso-drano io va hianao, ry dada? Tsofy rano re aho, dia izaho koa, ry dada ô! Sady nanandratra ny feony nitomany Esao. 39Ka izao no navalin'Isaaka rainy azy: Tsy hisy menaky ny tany amin'ny fonenanao. Tsy hisy ando avy amin'ny lanitra. 40Fa ny sabatrao no hivelomanao, Ary ny rahalahinao no ho tompoinao. Mbola ho avy anefa ny hanifihanao ny jiogany, Ka ho tapakao ho afaka min'ny vozonao iny.
41Raikitra ao am-pon'i Esao ny fankahalana an'i Jakoba noho ny tso-drano nomen-drainy azy, ka hoy izy tao am-pony: Ny andro hisaonako an'i Dada dia efa antomotra; amin'izay dia hovonoiko i Jakoba rahalahiko. 42Nolazain'olona tamin-dRebekà izany tenin'i Esao zanany lahimatoa izany, ka nampanalainy Jakoba zanany lahiaivo, dia hoy izy taminy: Indro Esao rahalahinao mikasa hamaly faty anao, ka hamono anao. 43Noho izany, anaka, henoy aho: Miaingà hianao ary mandosira any amin'i Labana anadahiko, any Harana, 44ka mitoera any andro vitsivitsy mandra-pionon'ny hatezeran'ny rahalahinao. 45Fa rahefa afaka ny hatezeran'ny rahalahinao aminao ka hadinony izay nataonao taminy, dia haniraka hampaka anao any aho. Hataoko ahoana no famoy anareo mirahalahy, indray andro?
46Ary hoy Rebekà tamin'Isaaka: Boboky ny miaina aho noho ny amin'ireny zanakavavin'i Heta ireny, raha maka vady tahaka ireny Jakoba, amin'ireny zanakavavin'i Heta ireny, amin'ny zazavavy amin'ity tany ity, dia hampaninona ahy intsony izay aina?
Jenezy toko 28
Ny niaingan'i Jakoba ho any Mesopotamia - Fahitana tao Betela.
1Dia nantsoin'Isaaka Jakoba, ka notsofiny rano sy nomeny teny hoe: Aza maka vady amin'ny zanakavavin'i Kanaana. 2Fa miaingà hianao, mankanesa any Pandan-Arama, any amin'i Batoela, rain-dreninao, ka any maka vady, amin'ireo zakavavin'i Labana, anadahin-dreninao. 3Hohasoavin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra anie hianao, ka hampitomboiny sy hohamaroiny, ho tonga firenena maro. 4Homeny anao anie ny fanasoavana an'i Abrahama, dia ho anao sy ny taranakao, mba hanananao ny tany itoeranao, izay efa nomen'Andriamanitra an'i Abrahama. 5Dia nalefan'Isaaka Jakoba, ka nandeha nankany Padan-Arama, amin'i Labana, zanak'i Batoela, Arameana, anadahin-dRebekà, renin'i Jakoba sy Esao.
6Hitan'i Esao fa nitso-drano an'i Jakoba Isaaka sy naniraka azy haka vady any Padan-Arama, sady nanome teny azy teo an-pitsofan-drano azy, nanao hoe: 7Aza maka vady amin'ny zanakavavin'i Kanaana, ary nanaiky ny tenin-dray aman-dreniny Jakoba ka lasa nankany Padan-Arama. 8Hitan'i Esao fa tsy tian'Isaaka rainy ny zakavavin'i Kanaana, 9ka lasa izy nankany amin'Ismaely, naka an'i Maheleta, zanakavavin'Ismaely, zanak'i Abrahama, sy anabavin'i Nabaïota, ho vadiny, fanampin'ireo efa nananany.
10Dia niala tany Bersabea Jakoba nankany Harana. 11Nony tonga tao amin'ny fitoerana anankiray izy, dia nandry teo, fa efa maty masoandro. Naka vato anankiray tao izy, nataony ondana, dia nandry teo, tamin'izany fitoerana izany. 12Ary nanonofy izy, ka indro, nisy tohatra anankiray niorina tamin'ny tany tafapaka amin'ny lanitra ny lohany; ary nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. 13Ary niseho tery ambony Iaveh ka nanao hoe: Izaho no Iaveh Andriamanitr'i Abrahama, rainao, sy Andriamanitr'Isaaka; io tany andrianao io, dia homeko anao sy ny taranakao. 14Ho tahaka ny vovoky ny tany ny taranakao; hitatra any andrefana sy any atsinanana hianao, ary any avaratra sy any atsimo; ary aminao sy amin'ny taranakao no hanasoavana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. 15Indro aho momba anao, ka hiaro anao any amin'izay halehanao rehetra, sy hampody anao indray amin'ity tany ity. Fa tsy handao anao aho, mandra-pahatanterako izay voalazako taminao.
16Nahatsiaro tamin'ny torimasony Jakoba, ka nanao hoe: Eto amin'ity toerana ity tokoa Iaveh, fa izaho tsy nahalala izany. 17Dia raiki-tahotra izy, ka nanohy hoe: Endrey mahatahotra ity fitoerana ity! Eto tokoa ny tranon'Andriamanitra, eto no vavahadin'ny lanitra! 18Nifoha maraina koa izy, dia nalainy ilay vato nataony ondana, naoriny nataony tsangam-bato ka norotsahany diloilo ny tampony. 19Nataony hoe Betela no anaran'io fitoerana io. Loza anefa no anaran'ny tanàna tany aloha. 20Ary nanao voady Jakoba ka hoy izy: Raha momba ahy tokoa Andriamanitra ka miaro ahy amin'izao dia alehako izao, raha manome ahy hanin-ko-hanina sy lamba hitafiako; 21ka tafaverina soa aman-tsara any an-tranon'ikaky aho, dia Iaveh no ho Andriamanitro. 22Ho tranon'Andriamanitra ity vato naoriko ho tsangam-bato ity, ary haloako ho anao ny am-pahafolon'izay rehetra homenao ahy.
Jenezy toko 29
Jakoba tany Mesopotamia - Ny fanambadiany roa - Ny zanany.
1Dia nanohy ny diany Jakoba, ary nandeha ho any amin'ny tanin'ny zanaky ny Tatsinanana. 2Nitazana izy ka indro lavaka fantsakana anankiray teny an-tsaha, ary indreo nisy ondry telo dia, nandry teo anilany, fa teo amin'izany lavaka fantsakàna izany no fampisotroan-drano ny biby fiompy, ary lehibe ny vato teo ambonin'ny vava lavaka.
3Tao no niangonan'ny biby fiompy rehetra. Akodia aloha ny vato avy eo ambonin'ny vava lavaka fantsakàna, ka ampisotroina ny biby fiompy, dia averina amin'ny fitoerany eo am-bava lavaka fantsakàna indray ny vato.
4Ary hoy Jakoba tamin'ireo mpiandry ondry: Ry rahalahy, avy aiza moa hianaore? Hoy ny navaliny azy: Avy any Haràna izahay. 5Dia hoy izy taminy: Mba fantatrareo va Labana zanak'i Nakora? Ary hoy ny navaliny: Fantatray izy.
Pejy: Voalohany < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2633 seconds